HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 25-NOV-2020
Wednesday November 25, 2020 - 10:22:53 in Wararka by Mogadishu Times
R/ Wasaare Rooble oo kormeeray qeybta 60aad iyo Dugsiga tababarka Ciidanka ee Baydhabo
R/W/ha XFS Md.Maxamed Xuseen Rooble ayaa kormeeray qeybta 60aad ee Ciidanka Xo ogga dalka iyo Dugsiga tababarka Ciidanka Xo ogga Dalka ee ay maamusho D/Ingiriiska.
R/Wasaare Rooble ayaa warbixinno ku saa bsan qaabka iyo noocyada tababarrada ay bix iyaan ka dhageystay saraak iisha maamusha xerada. Waxuuna uga mahadceliy ey taageerada ay la garab taagan yihiin dowladda, ga ar ahaan dhismaha ciidamadda qaranka.
Md.Rooble ayaa kormeeray xarunta qeybta 60m aad ee CXDS, isagoo warbixin ka dhageystay Taliyaha qeybta. "CXDS waa naftood hurayaal u taagan difaaca dalkooda, qof walba oo Soo maaliyeed waxuu ku jiifo waa dhiigiina aad hur aysaan, waaan idin leeyahay hambalyo, anagu na waan idinku garab taagannahay mar walba sidii aad dalkaan uga saari lahaydeen argagix isada”.
R/Wasaaraha ayaa kormeeray qeybaha kala duwan ee xarunta CXDS qeybta 60aad oo dho waan dib-u-dhis iyo qalabayn lagu sameeyey, waxuna ku boggaadiyey saraakiishii uu kula kul may howlaha muhiimka ah ee ay u hayaan shac abka Soomaaliyeed.
Sidoo kale, R/Wasaaraha XFS Md. Maxam ed Xuseen Rooble ayaa booqday dhaawacyada ciidanka ee ku wax yeeloobay dagaallada ay ku la jiraan kooxaha argagixisada ah, isagoo Alle uga baryey inuu siiyo caafimaad.
Musharax Daahir Geelle oo farriin u diray Madaxweyne Farmaajo
Musharaxa Xilka Madaxweynaha Soomaal iya Daahir Maxamuud Geelle oo ka mid ah Mu sharaxiinta ku shirsan M/Muqdisho ayaa Madax weynaha Soomaaliya Maxamed C/hi Farmaajo ugu baaqay in uusan noqon kaligii talis uuna og olaado in doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dha cdo Soomaaliya.
Waxaa uu u soo jeediyay Mad axweyne Farmaajo inuusan dhagey san tallada dadka asaga ka cabsa da laakiin aan u cabsan ee garbihi Isa jooga, kuwaasoo uu sheegay in xataa aysan ka shaqeynin dantiisa, maadaama kaligii talisn imada ay asaga xataa halis ku tahay.
Waxaa uu ugu baaqay in aan Shalay hoga amintiisa aan la suurad xumeyn Madaxweyne Farmaajo, islamarkaana aysan taariikhdu ka qa ldan oo la mid noqdo hoggaamiyeyaashii tallada kaga horeeyay oo si nabadgalyo ah xilka ku wa reejiyay kadibna Magaalada dhex dhinac ka deg ay.Waxaa uu tusaaleeyay sida uu taariikh liitada ugu dambeeyo kaligii talista, waxaana uu sheeg ay in markii uu xilka joogana uu wel wel ku nool yihiin markii uu ka degana uusan bulshada ku dhex noolaan Karin maadaama uu ahaa kaligii talis dadka taladooda diiday.
”Kali talisnimadu intaysan muwaadiniinta iyo siyaasiyiinta kale khatarta aysan kunoqon wa xay khatar ku noqotaa qofka xilka hayo marka as”isagoo sii hadlay ayuu yiri Waxaa uu intaasi kusii daray "Maxamed C/hi Farmaajo ayaan u daneyneynaa sidii dadkii ho re ku imaan jireen waa ku yimid sidii dadkii hore ku dagi jiren inuu ku dago baan rabnaa hadii an ku dagina dhib baa imaan karo”
Waxaa uu adkeeyay in dhammaan Musha raxiinta xilka Madaxweynaha looga baahan yah ay inay wax ku raadiyaan hanaan nabdoon oo sahli kara in aysan qalqal dareemin shacabka Soomaaliyeed oo ah kuwo Shalay la doonaayo in la hoggaamiyo sidoo kalena hoggaamiyeyaa sha tallada hayana laga doonaayo ka shaqeyn ta hanaan nabadoon.
Md.Daahir Maxamuud Geelle oo horay Wasiir 2 jeer u soo noqday, Xildhibaan iyo Safiir ayaa ka mid ahaa Mas’uuliyiinta fara kutiska ah ee ka tagay la shaqeynta Madaxweyne Farmaajo ka dib markii uu iska diiday in loo adeegsado han aan buunbuunin oo ka baxsan hanaanka dowla dnimada.
Musharixiinta ku shirsan Muqdisho oo Sh. Shariif u doortay shir guddoon!
Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ee 2021 oo ku shirsan maalintii 4 aad M/ Muqd isho ayaa gudooomiye u doortay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna hoggaamiyaha mada sha xisbiyada qaran Sh.Shariif Sheekh Axmed.
Sidoo kale Xogheyn waxaa loo doortay Md. Xuseen Cabdi Xalane oo ahaa Wasiirkii hore Maaliyadda, halka Afhayeen loo doortay Ridwaan Xirsi Ma xamed R//Wasaare Kuxigeen kii hore.
Shirkii Midowga Musharixiinta ayaa Shalay waxaa ku biiray culimada Suufiyada iyada oo ga linka dambe ee Shalay ay ka qayb galayaan xu bno ka tirsan ganacsatada M/Muqdisho ee caa simadda Soomaaliya. Sida loo qorsheeyay shirk aan ayaa waxaa la soo gabangabeeyo Shalay hayeeshee waxaa jira warar sheegaya inay suur ta gal tahay inuu dib u dhaco ilaa 25 bisha Nov ember 2020
3 maalmood ee shirka u socday Musharaxii nta Madaxweynayaasha ayaa kulamo gaar gaar la yeelanayay qeybaha kala duwan ee bulsh ada, sida Culumaa’udiinka, odayaasha dhaqan ka iyo ururada Bulshada rayidka.
Shirkii U Socday Musharaxiinta Madaxw eynaha Oo Waqti Hor Leh Lagu Daray
Shirka maalintii 3aad u socda Musharaxiinta xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa lagu waday in Shalay oo tal laado ah lasoo ga ba-gabeyo , hayeeshee waqti dheeraad ah ayaa lagu daray. waxay wararku sheegayaa in Shirka Musharaxiinta xil ka Madaxweynaha lagu daray 1 Maalin oo dhe eraad, iyadoo ah lasoo gaba-gabeyn doono. arbacadan
Musharaxiinta ayaa xiliga an kulan aalada ZOOM-ka ku la qaadanaya Wakiilada Bee sha Caalamka ee Soomaaliya, iyagoona kala ha dla ya Arrimaha doorashada dalka ka dhacaya dh ammaadka sandkaan 2020/2021. Sidoo kale Musharaxiinta ayaa Beesha Caalamka u gudb in doona cabasho ay ka qaaban Guddiyada Do orashooyinka heer federaal iyo heer ma amul Goboleed ee la magacaabay, iyagoona Guddiy ada ku sheegay inay ku jiraan xubno ka tirsan Hay’adda NISA.
Shirka Musharaxiinta ayaa waxaa Shalay ku biiray Culimadda Ahlusunna Wajljameeca, isla markaana Musharaxiinta ay ka dhageysteen Ar agtidooda ku aaddan sidii ay u dhici laheyd doorasho xor ah, waxaana Culimadda ay ku ba aqeen in la xaliyo khilaafyada jira.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlama an ka FSMd.Cabdi Xaashi C/hi iyo ku-xigeenkiisa 1-aad Abshir Bukhaari ayaa ku biiray shirka maalintii 4aad galay ee ka socda Hotel Jasiira ee M/Muqdisho. Musharaxiinta ayaa sidoo kale waxaa Habeen hore kulan gaar ah la qaatay Guddoomi yaha GShBFS Md.Maxamed Mursal Sh Cabd iraxmaan iyo ku-xigeenkiisa 1aad Muuday, wax aana dhinacyada ay xaliyeen khilaafyo ka dhex jiray, iyadoona la heshiisiiyay Guddoomiye Muu dey iyo md. Kheyre.
Sh.Soomow Oo Guddiyada Doorashada 2020/21 Ugu Baaqay Inay Is Casilaan
Sh. C/qaadir Sh.Maxamed Sh.Abuukar Soo mow oo kamid ah Culimada Ahlusunna Wajam eeca ee G/Banaadir ayaa ka hadlay khilaafka ka taagan Guddiyada doorashooyinka 2020/ 20 21, kadib markii Shalay kulan ay la qaateen Musharaxiinta xilka Madaxweynaha.
Sh.Soomow oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in muhiim ay tahay in DFS ay tixgeliso Cabashada Musharaxiinta ay ka qa baan Guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul Goboleed ee la magacaabay.
Wuxuu Sheekh ugu baaqay Madaxweynaha iyo Madaxda kale ee dowladda inay sameeyaan tanaasul, isla markaana laga wada-hadal Guddi yada door ashooyinka ee walaac daran laga mu ujiyay, si ay u dhac do doora sho xor oo loo dhan yahay.
Isaga oo sii hadlaayay Sh.Soomow ayuu Guddi yad a doorashooyinka iyo kuwa xalinta khilaaf aadka ugu baaqay inay Is Casilaan, si uu u bad bado dalka Soomaaliya, maadaama loo jeediy ay ee deymo kala duwan oo ku aadan inay ka tir san yi hiin Hay’adda NISA iyo shaqaalaha DFS.
"Haddaad Xaakim tahay oo lagu yiraahdo noo Garsoor 2da qof aad Garsooreysid mid uu ku yir aahdo caddaaladaada kuma kalsooni lama yira ahdo khasab waaye anaa ku xukumaayo Guddi ga Doorashooyinka ee la magaacabay waxaan u soo jeedineynaa inay is casilaan” ayuu yiri Sheekh C/qaadir Soomow.
Ugu dambeyn Sheekh Soomow ayaa Mad axda dowladda iyo kuwa maamul Goboleedya da ugu qeylo dhaamiyey inay ka shaqeeyaan na badgalyada iyo sidii ay u dhici laheyd doorasho xalaal ah oo ku dhacda waqtigii loogu tala-gal ay, lana fogaado wax kasta oo keeni qalaalo siy aasadeed.
Si kastaba hadalka Sheekh Soomow ayaa wa xaa uu kusoo aadayaa, iyadoo khilaaf xoogan uu ka taagan yahay Guddiyada doorashooyinka ee 2020/2021 ee la magacaabay, isla markaana Musharaxiinta ay siweyn uga soo horjeedan Gu ddiyada, iyagoona ku tilmaamay inay ku jiraan
xubno ka tirsan NISA iyo shaqaalaha DFS.
Gudoomiye ku xigeenka Aqalka Sare” Madaxweynaha laguma aamina karo Doorashada”
Gudoomiye ku xigeenka1aad ee Aqalka Sa re Abshir Maxamed Maxamuud Bukhaari ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo &xukuuma d diisa aan lagu aamini Karin tallada dalka, isla markaana aan kalsooni lagu qabi Karin doora sho ay qabtaan.
Waxaa uu bogaadiyay xubna ha Musharaxiinta xilka Mad axweynaha ee ku shirsan Muqdisho, isagoo sheegay in ay muhiim u yihiin tallada dalka.
Waxaa uu sheegay in shaqooyinka ay hayaan ay yihiin kuwo lagu badbaadinaayo dalka, maad aama Madaxweyne Farmaajo iyo hay’addihiisa ay ku guuldareysteen.
Waxaa uu ugu baaqay Madaxweyne Farma ajo inuu la yimaado tanaasul ku aadan waxa loo egeysiiyay guddi doorasho oo uu sheegay in ay san u qalmin loona baahan yahay in laga labto.
Wararkii ugu dambeeyay roobabkii duufaa nada watay ee ku dhuftay Xaafuun
Waxaa Xarunta G/Karkaar, lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen Masuuliyiinta Dawladda oo uu hogaaminayo G/G/Karkaar,Hay’adaha Caala miga ah iyo Ururadda Maxaligga ah kaas oo loo ga hadlayo sidii loogga jawaabi lahaa xaaladda adag ee ka dhalatay roobabkii duufaanadda wat ay ee ku dhuftay degmadda Xaafuun.
Shirkaan waxaa sidoo kale laga soo jeediyay warbixi no la xiriira xaaladda guud ee D/Xaafuun ee hadda ka jirta, waxaana laysla gartay in la diro kooxo ka jawaa ba xaaladda degdegga ah ee ka dhalatay rooba abkii duufaanta watay ee dhawaan deegaanada as ku shuftay.
Sidoo kale Hay’adaha ka qaybgallay shirka ayaa balan-qaaday in sidda ugu dhaw ay gurm ad u gaarsiin doonaan D/Xaafuun iyo deegaa nadda hoostagga.
Xog: Qoor Qoor oo aqbalay dalabkii mushar axiinta balse ku xiray hal shardi
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor, ayaa kulan uu hab een hore la qaatay qaar ka mid ah musharaxiin ta xilka Madaxweynaha Soomaaliya, ku ballan qaaday fulinta qodob ay cabasho ka qabeen oo ku aadan guddiyada doorashada.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, madax weyne Qoor Qoor ayaa musharaxiinta ka aqb alay inuu badalo guddiga doorashada xubnaha ku jira qaarkood, balse waxa uu sharuud kaga dhigay in marka hore ay beddalaan maamullada kale ee dalka.
"Waa naga aqbalay inuu beddalo dadka qaar ee guddiga ku jira balse waxa uu diiday inuu bil aabo isagoo naga codsaday in marka aan ka ke eno maamulada kale,” ayuu yiri mid kamid ah musharaxiintii la kulmay Madaxweyne Qoor Qo or, oo la hadlay Caasimada Online.
Kulankaan ayaa daba socday kulan kale oo 2habeen ka hor ka dhacay guriga Madaxweyni hii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxam uud waxaana la aaminsan yahay in Qoor Qoor dhab ka aheyn balanqaadkii uu Habeen hore sameyay. Shuruuddan ayaa xubnaha qaar ay ku macneeyeen mid adag, oo Qoor Qoor uga gol leeyahay inuu isaga aamuso, oo aysan daacad ka ahayn.Qoor Qoor ayaa markii la doortay, in kasta la xajinayey Villa Somalia, la rumeysnaa inuu mararka qaar yeelan doono dhiiranaan uu kaligiis go’aan ku qaato, hase yeeshee taas wax ay noqotay mid lagu hungoobay.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee K/Afrika iyo Ma daxda Safaaradda oo kulan ku yeeshay Durban.
Mas’uulinta Safaaradda oo uu hogaaminayo Danjiraha oo ay wehliyaan U qeybsanayaasha Ganacsiga iyo Waxbarashada ayaa socdaal ku tagay M/Durban,waxeyna kulamo la qaateen qa ar ka mid ah Jaaliyadda Soomaalida.
Kulankan ayaa kasoo qeybgalay Ganacsa to,Waxgarad,Aqoonyihanno iyo Arday waxa ka barata Jaamacadaha Gobolkaas,ayaa si weyn u soo dhaweysay Mas’uulinta waxa ayna ka cods adeen inay Safaaraddu ka warqabto ganacsata da Gobolka KZN oo ah ka mid ah Gobolada gan acsatada Soomaalida boobka loogu geysto.
U qeybsanayaasha Ganacsiga& Waxbarash ada,Abdirahman Maxamed Xaaji Xasan iyo Cab di Xalane Xirsi ayaa sheegay inuu safarkooda la xiriiro ka warqabka Jaaliyadda qaar ka mid ah Gobolada Soomaalidu u badan tahay,waxaana horay ay Mas’uulintan safarro noocani ku tage en qaar ka mid ah Gobolada Soomaalida u ba dan tahay ee K/Afrika.
Danjire Maxamed Cali Mire ( Nabadoon ) aya a sheegay in safarkooda la xiriiro ka warqabka Jaaliyadda Durban iyo wacyagalinta dilalka oo bata xilliyada sanad dhamaadka iyo waliba sidii adeegga Safaaradda loo gaarsiin lahaa Gobo lka KZN.
Booliska oo Shabaab ku eedeeyay inay gub een 7 gaari oo shacab leeyihiin
Afhayeenka Ciidanka booliska Soomaali yeed Sadiiq Aadan ayaa sheegay in Al-Shab aab ay Habeen hore gubeen 7 Gaari oo Xamuul oo ay leeyihiin dad Shacab ah, kuwaasoo marayay G/Bakool eeK /ta Somaliya.Falkaan ayaa ka dhacay sida uu sheegay Afhayeenka tuulada Emed Koore ee G/Bakool.
Gaadiidkaan ayaa ka baxay M/Beled weyne, waxaana uu kusii jeeday M/Xuddur, kuwaasi oo waday raashin dad shac ab leeyihiin.
"Habeen hore abbaare 08:00 fiidnimo ayeey Argagix isadu ku gubeen 7 gaadiid ah oo nuuca xamuul ka qaada ah bananka hore ee Tuulada EMED KOOREEY ee G/Bakool, gadiidkaan oo ay laha yeen isla markaana u rarnaa dadka shacabka ah, ayaa ka soo baxay Baladweyne kuna sii jee day Xudur”ayuu yiri Afhayeenka Ciidanka.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Ururka Al-Shabaab oo ku aaddan warkaan kasoo ba xay DFS ee loogu eedeeyay inay gubeen gaad iiid ay leeyihiin Shacab ah.
Madaxweynihii hore ee KGS Md.Shariif Xas an Sh.Aadan oo ka mid ah musharaxiinta mada xweyna ha Soomaaliya ayaa ka she egay shir ka musharaxiinta ugaga socdo M/Muqdisho ay aa ka hadlay war uu dhowaan ka soo yeeray R/ wasaare ku xigee nka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. Shariif Xasan ayaa aad u dhaliilay hadal uu dho waan sheegay Mahadi Guuleed Khadar oo shee gay in doora shooyinkii Baydhabo, Dhuusama reeb iyo Jowhar ay ahaayeen kuwo aan si sax ah loo maamulin.
"3wareeg ayaan arki jirney iyadoo la baahdo loo oomo,hal wareeg waa diidanahay,xalna ku ma imanayo hal wareeg intaa waa la xishoo nayay waxaana l adiidanaa in siyaalihii hore la soo ma ray la aado.”ayuu yiri Shariif Xasan Sh. Aadan.
Sidoo kale Shariif Xasan ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uusan diyaar u ahayn in lala tartamo oo uu doonayo in kaligiis uu tarta mo.
"Waxaan aaminsanahay in saaxibkey in doo rasho lala galo ma rabo isagaa jaakad toshay isaga kaligii la eg in jaakad dadka oo dhan la eg la tolaan rabaa dalkana sidaa ayaa u dan ah. ”ayuu sii raaciyay Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Shariif Xasan waxa kale oo uu ka hadlay gu ddiyada doorashada waxana uu ku taliyay in gu ddiyo sidii la arki jirey la sameeyo isagoo xusay in arrinta guddiyadana ay tahay mid Madaxwe ynaha u gaar ah.
Kulan ay ka qeybgalayaan inkabadan toban musharax madaxweyne ayaa maalintii 4aad wa xa uu ka socdaa hotel Jazeera ee M/ Muqdisho iyadoo lagu wado in kulankaa Shalay la soo ga bagabeeyo lagana soo saaro warmurtiyeed ka hadlaya arrimaha doorashooyinka dalka. Hase yeeshee hal maalin oo dheeri ah misna lagu daray kulnkaa
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo she egay inay Suudaan ka caawiyeen hanna anka loo maro dayn cafinta
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya,Md. Cab diraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in dowl adda Soomaaliya ay Suudaan uga faa'ideysay khibraddeeda Deyn cafinta.
Dowladda Suudaan ay aa haatan dib u bilaabaysa shuruudaha ku xusan cafi nta dey maha hay’adda IMF, sharuudahaas oo ay Soo maaliya ka soo gudubtay goor hore sida uu sheegay wasiir Bayle.
Sida ku cad qoraal ka soo baxay IMF, dowl adda Soomaaliya ayaa suudaan siisay waddooy inka Deyn cafinta ee shuruuda ha IMF iyo han aanka Kormeerka Shaqaalaha ee SPM.
"Had iyo jeer dib-u-habeynta Maaliyaddu waa safar adag, balse aan ka soo gudubnay oo faa'iidadiisana aan helnay. Waxaa naga go'an in aan sii laba laabno dadaalka aanu ku hagaajin ayno hanaanka Maaliyadda Soomaaliya,’ ayuu yiri wasiirku.XFS ayaa horey u sheegtay inay ka gaartay wada hadalkii ugu damb eeyay ee bar naamijka dayn cafinta Soomaaliya.
Boqorka dalka Spain oo laga helay Cudurka Covid-19.
Boqorka dalka Spain ayaa waxaa laga helay xanuunka Covid-19, xilli uu dalkaasi ku siibaa hayo.
Boqor Felipe VI oo 52 sano jir ah ayaa wa xaa u bilaabmay 10 maalin oo uu kujirayo xaalad karan tiil ah, maadama laga helay Fayraska.
Boqorka wadanka Spain ayaa la sheegay in xanuunka uu Axadii u gudbiyay shaqsi kale, balse wax faahfaahin oo intaasi ka dheer laga ma bixin.haatan dalka Spain guud ahaan dadka xanu unka laga helay waxa ay ku dhaw yihiin 1.6 Mily an oo ruux halka sidoo kale tirada dhimashada ay gaareeso 43,131 ruux, tan iyo markii uu Fayska gaaray waddankaasi
G/Banaadir Oo Digniin Kasoo Saaray Qalqal-Gelinta Amniga Muqdisho
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa Shalay oo tallaado ah ka hadlay Arrimaha doorashooy inka dalka ka dhacaya iyo tartanka adeg ay Mu sharaxiinta u geli doonaan Doorashooyinka ka dhacaya Muqdisho.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay in Musharax kasta oo u tartam aya Doorashada inuu u furan yahay inuu kusoo bandhigto M/Muqdisho ololihiisa Doora shada, isla markaana Mushar axiinta ay waddoo yinka ku dhagsan karaan Boorarkooda.
Maamulka Gobolka ayuu Afhyeen Salaax Xa san Cumar Saalax Dheere sheegay in uusan wax shuruud ah ku xiri dooni Musharaxiinta olol ahooda iyo aragtidooda ku aadan Doorashada ku soo bandhigaya Caasimadda dalka ee Mu qdisho.
Saalax Dheere ayaa tilmaamay in Maamulka Gobolka uusan marnaba aqbali doonin in Caa si madda laga abuuro xaalad siyaasadeed oo sa babi karta qalalaasi, wuxuuna ka digay Mushar axiinta inay sameeyaan wax kasta oo keeni kara amni darro.
Afhayeenka Maamulka ayaa Carabka ku dhuf tay in lala xisaabtami doono cidkaste oo isku da yda in ay qalqal galiso amniga Caasimad da dal ka ee Muqdisho ama abuurta falal la xar iira xasiloonidaro.
Ugu dambeyn Afhayeenka maamulka Gobol ka Banaadir ayaa sheegay inay ay ka go’an tah ay sidii Muqdisho u marti gelin laheyn doorasho oyinka ka dhacaya, isagoo xusay inay ka sha qeyn doonaan sidii ay u dhici laheyd doorasho xor oo si nabad ah ku dhacda.
Xog: Muuddey oo cafis ka dalbaday Xas an Cali Kheyre ka dib qirasho uu sameey ey
Guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee BFS, Md.Cabdiweli Ibraahim Muudey oo Dorraad ka qeyb galay shirkii musharaxiinta xilka madaxwe ynaha uga socd ay Magaalada Muqdisho, ayaa ka garaabay xil ka tuuristii Xas an Cali Kheyre.
Muudey ayaa cafis ka dalbaday Xasan Cali Kheyre, isaga oo qirtay inuu isagu ka dambeeyay fulinta qorshihii lagu riday xukuumaddii uu hogaaminayey, sida ay xubno goob joog ah u sheegen Caasimada Online.
Waxa uu shirkaasi oo albaabadu u xirnaay en uga waramay qaabkii uu u dhacay abaabulkii uu baarlamaanku kalsoonida ugala laabtay xuk uumaddii Kheyre, isagoona xusay in qorshaha asi uu intiisa badan lahaa.
Md.Xasan Cali Kheyre ayaa cafiska uu ka da lbay Cabdiweli Muudey ku aqbalay shirkii Dorraad oo uu goob joog ka ahaa Guddoomiyaha baarl amaanka, Maxamed Mursal Sheekh.
Md.Muudeya ayaa ugu dambeyntiina ka dhaw aajiyey in Kheyre ay u wanaagsaneyd in xilka la ga qaado marka loo fiiriyo xaalka uu xiligan ta agan yahay dalka, maadama uu wajahayo door asho ay ku xeeran yihiin dareeno badan. Dhawaan ayey aheyd markii sidan oo kale uu Md.Xasan Cali Kheyre ka garaabay weerarkii 17-kii December 2017 ay ciidamo ka tirsan dow ladda ku qaadeen guriga Cabdiraxmaan Cabdis hakuur, isagoona raali-gelin buuxda ka siiyey arrinkaasi.
Cafiska Muudey ayaa sidoo kale u muuqda mid qeyb ka ah is-laab-xaadhashada siyaasiyiin ta, maadama xiligan la isku diyaarinayo doora sho, midaasi oo ay ku kala aragti duwan yihiin mucaaridka iyo madaxda u sareysa dalka.
Maxaa Looga Hadlay Shirka 7 laha Ee Maamulka G/Banaadir?